Sheeko xiiso leh: Wiil guryahooda geeya gabdhaha sida waalan qamriga u soo caba | Somaliska
Bal aan ka yara nasano siyaasadda iyo wararka joogtadda ah oo aan ku yara nasano sheeko xiiso leh oo ka dhacday gobolka Enköping ee dalkaan Iswiidhan.
Wiil dhalinyarro ah oo lugu magaaabo Ludwig Cygnel, islamarkaasina ah 21 jir ayaa dhawaan waxaa uu qaatay leeysinka baabuurta. Wuxuu aad u jecel yahay in uu gaarigiisa kaxeeysto markasta oo helo fursad helo oo ay isaga iyo saaxiibadiis ku kulmaan soona wareegga. Hase ahaatee wareegtiisii magaaladda waxaa ay isu badashay mid uu ugu axsaan falo bulshadda.
Wuxuu bilaabay in si bilaash guryahooda maalmaha fasaxa ah ku geeyo dadyowga taga baararka qamriga laga cabo, dabadeedna si waali ah caba qamriga kuwaas oo ay ku adag tahay ineey keligood tagaan guryahooda gaar ahaan gabdhaha yar yar.
“Kolka aan wareegayo magaaladda waxaan arkaa dad badan gaar ahaan gabdhaha oo keligood u socda guryahooda, waxaan ku fekeray markaas bal inaan wax uun sameeyo” ayuu yiri Ludwig Cygnel oo tilmaamayyey sida uu ku bilaabay howshan samafalnimo.
Wuxuu sheegay oo kale in uu arkay habeen habeenada ka mid ah gabar keligeed guureeyneysa ama socota, waxaa uu go’aansaday in uu cawiyo. Wixii intaa ka dambeeyeyna waxaa ay u noqdeen fal uu caadeeystay.
“Dadka aan aniga guryahoodii geeyey waxeey ahaayeen kuwo socodku dhibayo. Labbo maalin ka dibna waxaa ay ii soo qoreen fariimo ay iigu mahadcelinayaan” ayuu yiriLudwig Cygnel oo ku faraxsan adeega uu hayo bulshadda.
Dhinaca kale wuxuu Ludwig sheegay in intii uu howshan ku guda jiray uu dareemay sida ay dadka qaar ugu adag tahay in ay raacaan gaari uu wato wiil dhalinyarro ah oo keligiis ku wareegaya. Waxaana uu xusay in aad u fahamayo dareenka noocaas ah. Wuxuu sheegay oo kale in uu go’aansaday si shakiga uga saaro gabdhaha yar yar ee uu qaado, uu soo kaxeeysto gabar kamid ah gabshaha asxaabtiisa taas oo gacan ka siisay qaadista gabdhaha misna ka baqanaya in ay raacaan gaari nin keligiis ah oo aaysan aqoon.
“Waxaan fiiceyn in qof keligiis gurigiisa aado, waa in la is caawiyaa. In aad gaari kaxeeyana waxeey ii tahay hobi, misna inaan wax wanaag ah sameeyo dhinaca kalena waa arrin wanaagsan” ayuu hadana yiri Lugwig.
Falkan axsaanimo ee Lugwig sameeyo, ayaa durba dadka deegaanka aad u soo jiitay kuna amaanay sida uu wax wanagsan ugu soo kordhiyey bulshadda. Dadka deegaanka oo qaarkood sameeyey bar facebook-ga ah ayaa aad loogu riyaaqay loogana mahadceliyey da daalkiisa axsaanimo. Balse Lugwig qudhiisa ayaa bartiisa facebook ku wargeliya kolka uu magaaladda soo aado ciddii raaceeysana uu ku sugayo. Ugu dambeyntii waxaa uu hadalkiisa ku soo koobay in isaga qarashka baansiinka kaga baxo ee aannu falkaasi axsaanka ahi ku qaadan wax lacag ah.
“Xero doofaar ayaan ka gees furaynaa qaxootiga Muslimiinta”
Maskiin Caawiye says:
saxiiboow anaga GYM ta naga soo qaad anagaa daalan oo tabcaan ah taasi ayay duco kugu jirtaayee . kaftan asxaantu waa wax aad u wanagsan loomana wada dhalan waa haybad gaar ah